निर्मला हत्या : समितिले न प्रमाण भेट्टायो न त दोषी - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
निर्मला हत्या : समितिले न प्रमाण भेट्टायो न त दोषी
काठमाडौं । बालिका निर्मला पन्तकोे बलात्कारपछि हत्या प्रकरण छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले कुनै उपलब्धिबिना नै आफ्नो १५ दिने म्याद गुजारेको छ । सह–सचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिले हत्याराको कुनै मेसो नै फेला पार्न नसकी म्याद गुजारेको हो ।
समितिलाई यसअघि एसपी डिल्लीराज विष्ट नेतृत्वको प्रहरी टोलीले गरेको छानबिनको पनि छानबिन र निर्मला हत्या प्रकरणको नयाँ शिरामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
हात लाग्यो शून्य
१५ दिने म्याद सकेर काठमाडौं फर्किनुअघि महेन्द्रनगरमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन ग¥यो । पत्रकार सम्मेलनमा समितिले अहिलेसम्म हत्याराको कुनै सुराक पत्ता लागेको जानकारी दिएन ।
‘प्रहरी अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको पाइयो, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मिसिल हेर्दा पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ’ उच्चस्तरीय छानविन समितिका संयोजक मैनालीले भने, ‘त्यसपछि पनि प्रमाण मेटाउने गतिविधि गरेको देखिएको छ ।’
निर्मलाको शव भेटिएको स्थानमै रहेको रगत लतपतिएको उनको सलवार एक महिला प्रहरीले पखालेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । त्यससँगै प्रहरीले शव भेटिएको क्षेत्रमा लक गरेर अनुसन्धान नै गरेको थिएन ।
भदौ ८ गतेदेखि मैनाली नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले महेन्द्रनगर पुगेर हत्याकाण्डको नयाँ तरिकाले सुरुबाटै अनुसन्धान गरेको थियो । तर १५ दिन बितेपछि समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अपराधीको कुनै पनि सुराक लाग्न नसकेको जानकारी दिइयो ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिले घटनबारे यसअघि प्रहरी अनुसन्धानको कमजोरीबारे आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । कञ्चनपुर पुगेलगत्तै छानबिन थालेको समितिले यसअघिको अनुसन्धानको पाटोलाई भने केलाएको छ । यस्तै घट्नासँग जोडिएका सबै पक्षसँग छलफल पनि गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीको गम्भीर कमजोरी
समितिले प्रहरी अनुसन्धानमा कमजोरी भएकैले जनतामा आक्रोश बढेर स्थिति उग्र बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको घटनाको मिसिल गहनरुपमा अध्ययन गरेको समितिले केही कमजोरीसमेत भएको फेला परेको जनाएको छ ।
‘प्रहरीले शव भेटिएलगत्तै त्यो क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर काम गर्नुपर्ने थियो’ संयोजक मैनालीले भने, ‘त्योसमेत काम त्यहाँ संवेदनशील भएर गरेको देखिएन, उल्टै बालिकाले लगाएको लुगा खोलेर पखाल्ने काम प्रहरीबाटै भएको छ ।’
तत्कालिन प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले शंकाको घेरामा रहेका बम दिदीबहिनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान नै गरेको थिएन ।
पीडित परिवार र स्थानीयलेसमेत पटक–पटक घटनाको अनुसन्धानका लागि निर्मला पन्त होमवर्क गर्न पुगेको साथीको घरबाट अनुसन्धान थाल्न आग्रह गरेका थिए । तर रोशनी र अनिता बम दुवैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थिएन् ।
बम दिदीबहिनीले स्वीकारेनन्
भदौ ७ गते सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर ८ गते नै कञ्चजनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व पठाइएको थियो । उच्च स्तरीय छानविन समितिले भदौ ८ गतेबाट दुवै दिदीबहिनीलाई समेत थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले डीएसपी कृष्णराज ओझाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेर सुरु देखि नै अनुसन्धानको काम अघि बढाएको थियो । बम दिदीबहिनीहरुको बयान लिने कामसमेत भइसकेको छ । यद्यपि उनीहरुबाट समेत घटनाबारे केही खुलेको छैन । उनीहरुले बयानमा आरोप अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
को हुन् त अपराधी ?
समितिले छानबिनले अनुसन्धानका क्रममा धेरै कुरा फेला पारिएको बताए पनि पत्रकार सम्मेलनमा अपराधीबारे केही कुरा पनि खुलाएन । १५ दिनसम्म समितिको छानबिन हेर्दा समितिले घटनामा संलग्नको वास्तविकता पत्ता लगाउन सकेको देखिँदैन ।
समितिले, डिल्लीराज विष्ट एसपी हुँदा ११ दिनसम्म हिरासतमा राखेर यातना दिइएका चक्रदेब बडूसहितका व्यक्तिसँगसमेत पनि सोधपुक्ष गरेको थियो । प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा लगाएर ११ दिनसम्म हिरासतमा राखी यातना दिएर जबरजस्ती कबुल गराउन लगाएको बडु परिवारको आरोप छ ।
नाम मात्रैको समिति ?
अनुसन्धानकै क्रममा भनेर प्रहरीले अरुलाईसमेत हिरासतमा राखेर यातना दिएको उनीहरुले बताएका छन् । समितिले यी विषयसमेत आफ्नो छानबिनका क्रममा हेरेको जनाएको छ । ‘हामीले स्थलगतरुपमा बुझ्नुपर्ने सबै बुझेर सकेका छौं’ संयोजक मैनालीले भने,‘प्रतिवेदन लेखन भइरहेको छ, अब केही दिनमा प्रतिवेदन सकेर गृहमन्त्रीमा बुझाउने छौं ।’
छानबिनका लागि महेन्द्रनगर पुगेलगत्तै प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बनको सिफारिस गरेर अनुसन्धान थालेको समितिले घट्नाका समयमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतसँगसमेत सोधपुछ गरेको जनाएको छ । ती अधिकृतसँगसमेत सोधपुक्ष गरेपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने समितिले जनाएको छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट